Wararka - Maxay yihiin siyaasadaha Shiinaha si ay u taageeraan horumarka xoogga leh ee warshadaha daabacaadda iyo baakadaha?
Maaddaama warshadaha daabacaadda iyo baakadaha ay leeyihiin awood xoog leh oo ay ku nuugaan foosha, iyo heerka wasakhda bey'adda ay tahay mid aad u hooseysa, dawladaha maxalliga ah iyo kuwa maxalliga ahba si weyn ayey u taageereen. Sanadihii la soo dhaafay, dowladda Shiinaha waxay soo saartay tiro badan oo ah siyaasadaha warshadaha ee la xiriira warshadaha daabacaadda iyo baakadaha.
1. "Ogeysiis ku saabsan hirgelinta daabacaadda cagaaran"
Bishii Oktoobar 2011, Maamulkii Guud ee Saxaafadda iyo Daabacaada iyo Wasaaradda Ilaalinta Deegaanka ayaa soo saaray "Ogeysiiska ku saabsan hirgelinta Daabacaadda Cagaaran" waxayna go'aansadeen in si wadajir ah loo hirgeliyo daabacaadda cagaaran. Baaxadda hirgelinta waxaa ka mid ah daabacaadda qalabka wax soo saarka, qalabka cayriin iyo kaabayaasha, geeddi-socodka wax soo saarka iyo daabacaadaha, Baakadaha iyo qurxinta iyo arrimaha kale ee daabacan, oo ku lug leh dhammaan habka wax soo saarka ee alaabada daabacan.
Intaa waxaa dheer, waxaan dhisi doonnaa qaab daabacaadda cagaaran ee warshadaha daabacaadda, si isdaba-joog ah u qaabeyn una daabacnaa heerarka daabacaadda cagaaran, oo aan si tartiib tartiib ah ugu dhiirrigelinnaa daabacaadda cagaaran dhinacyada biilasha, tikidhada, cuntada iyo baakadaha daroogada, iwm; in la abuuro shirkado muujiya daabacaadda cagaaran lana soo saaro siyaasado taageero ku habboon oo daabacaadda cagaaran ah
2. "Tilmaamaha Soo Iibsiga Cagaaran ee Ganacsiga (Tijaabada)"
Si kor loogu qaado dhismaha kheyraad-keydinta iyo bulshada deegaanka u habboon, hago oo kor u qaado shirkadaha si firfircoon u gutaan waajibaadkooda ilaalinta deegaanka, aasaasida silsilad sahayda cagaaran, ayna ku gaaraan horumar cagaaran, kaarboon yar iyo wareegsan, Diseembar 22, 2014 , Wasaaradda Ganacsiga, Wasaaraddii hore ee Ilaalinta Deegaanka, Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda waxay si wada jir ah u soo saareen "Tilmaamaha Soo iibsiga Cagaaran ee Ganacsiga (Tijaabada)", oo soo jeedisay:
Ku dhiiri geli shirkadaha in ay hagaajiyaan nidaamka soo iibsiga, si firfircoon uga qaybqaataan wax soo saarka alaabada wax soo saarka iyo geedi socodka wax soo saarka, iyo hagista alaab-qeybiyeyaasha si loo yareeyo isticmaalka alaabada ceyriinka ah iyo qalabka baakadaha iyadoo loo marayo falanqaynta qiimaha iyo qaababka kale, laguna beddelo agab badan oo deegaanka u habboon si looga fogaado ama yareeyo wasakheynta deegaanka;
Ku dhiirrigeli shirkadaha inay u baahan yihiin alaab-qeybiyeyaasha inay keenaan alaab ama alaabo ceyriin ah si ay u buuxiyaan shuruudaha baakadka cagaaran, in aan loo isticmaalin walxaha sunta ah ama waxyeellada leh sida qalabka wax lagu duubo, in loo isticmaalo qalabka wax lagu karsado ee dib loo cusbooneysiin karo, wax u dhimi kara ama aan waxyeello lahayn, lagana fogaado baakadaha xad-dhaafka ah, lana kulmo hoosta dhismaha baahida loo qabo, yareeyo isticmaalka alaabada baakadaha ku jirta;
Iibsadayaasha iyo alaab-qeybiyeyaashu waxay ku dhiirrigelin karaan isticmaalka cagaaran bulshada oo dhan iyagoo iska caabinaya xirmooyinka xad-dhaafka ah ee badeecadaha, iyagoo ku hagaya macaamiisha inay si firfircoon uga qaybqaataan isticmaalka cagaaran, ayna yareeyaan isticmaalka alaabada la tuuri karo iyo bacaha wax lagu iibsado ee caagga ah;
Shirkaduhu waa inaysan iibsan badeecooyin aan buuxin shuruudaha hay'adaha ganacsiga karti u leh si looga hortago baakadaha xad-dhaafka ah iyo dhiirrigelinta dib-u-warshadaynta.
Marka laga qiimeeyo shuruudaha ku habboon ee tilmaamahan, badeecadaha iyo adeegyada daabacaadda cagaaran waxay buuxinayaan shuruudaha soo iibsiga cagaaran, taas oo keeni doonta fursado cusub oo loogu talagalay horumarinta mustaqbalka ee shirkadaha daabacaadda cagaaran iyo kuwa soo saara qalabka cagaaran iyo kuwa kaabayaasha ah ee waddankayga. Isbedelka cagaaran ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona dhiirigelinta.
3. “Waxaa lagu sameeyay Shiinaha 2025 ″
Bishii Maajo 2015, Golaha Gobolka wuxuu soo saaray "istiraatiijiyad lagu sameeyay Shiinaha 2025 ″. "Lagu sameeyay Shiinaha 2025 ″ waa qorshe istiraatiijiyad qaran oo lagu xoojinayo wax soo saarka heerka sare ah, waana tobanka sano ee ugu horreysa waxqabadka" Istaraatijiyadda "Saddex Sano jirka ah" ee lagu dhisayo Shiinaha oo ah awood wax soo saar.
Barnaamijku wuxuu soo jeedinayaa in la dardar-geliyo isbeddelka cagaaran iyo casriyeynta warshadaha wax-soo-saarka, si guudna loogu dhiirrigeliyo is-beddelka cagaaran ee warshadaha soo-saarka soo jireenka ah sida birta, biraha aan birta ahayn, kiimikooyinka, qalabka dhismaha, warshadaha fudud, daabacaadda iyo dheehida, si xoog leh u horumarinaya una dhiirrigelinaya cagaarka farsamada iyo qalabka, iyo xaqiijinta wax soo saarka cagaaran; dardar-gelinta kobcinta jiilka cusub ee teknolojiyada macluumaadka iyo soo-saarista Teknolojiyada iyo horumarka, iyo soo-saarista caqliga oo ah jihada ugu weyn ee is-dhexgalka qotada dheer ee warshadaha iyo xog-ogaalnimada.
Waxaa lagama maarmaan ah in diirada la saaro horumarinta qalabka caqliga iyo wax soo saarka caqliga leh, kor u qaadida caqliga ee geedi socodka wax soo saarka, kobcinta habab cusub oo wax soo saar, iyo in si guud loo wanaajiyo heerka caqliga badan ee cilmi baarista iyo horumarinta shirkadaha, wax soo saarka, maamulka iyo adeegyada. Mustaqbalka, iyada oo si joogto ah loo soo bandhigayo wax soo saarka casriga ah, baakadaha casriga ah iyo daabacaadda ayaa noqon doona jihada horumarka mustaqbalka ee warshadaha.
4. “Ogaysiis ku Saabsan Qorshaha Yaraynta Iskuduwaha Iskuduwaha ee Warshadaha Muhiimka ah”
Bishii Luulyo 2016, Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Teknolojiyada iyo Wasaaradda Maaliyaddu waxay si wada jir ah u soo saareen "Ogaysiiska Qorshaha Dhimista Isku-darka Noolaha ee Isbedelaya ee Warshadaha Muhiimka ah." Marka loo eego shuruudaha bartilmaameedka Qorshaha, sanadka 2018, qiiqa VOCs ee waaxda warshadaha waxaa hoos loogu dhigi doonaa 3.3 milyan oo tan marka la barbar dhigo 2015.
"Qorshuhu" wuxuu soo xushay 11 warshadood oo ay ka mid yihiin khaanadaha, koolada, baakadaha iyo daabacaadda, kiimikada kiimikada, daboolka, iwm, oo ah warshado muhiim ah si loo dardar-geliyo yareynta VOC-yada loona hagaajiyo heerka wax-soo-saarka cagaaran.
“Qorshuhu” wuxuu si cad u sheegay in warshadaha baakadaha iyo daabacadu ay fuliyaan mashaariicda isbadalka farsamada geedi socodka, iyo inay kor u qaadaan codsiyada hooseeya ee (no) VOC-yada maaddada cagaaran, faashadda, xalalka ilaha, wakiilada nadaafadda, kooladaha, khafiifiyeyaasha iyo qalabka kale ee cayriin iyo kaabayaal ; Ku dhiirigeli isticmaalka tiknoolajiyada daabacaadda jilitaanka iyo tiknoolajiyada isku dhafan ee bilaashka ah, oo si tartiib tartiib ah u yareeya tiknoolajiyada daabacaadda xajmiga iyo tiknoolajiyada isku dhafan ee qalalan.
5. “Fikradaha Hagaya ee Dardargalinta Isbadalka iyo Horumarinta Warshadaha Baakadaha dalkeyga”
Bishii Diseembar 2016, "Fikradaha Hagaya ee Dardargelinta Is-beddelka iyo Horumarinta Warshadaha Baako ee Shiinaha" oo ay soo saareen Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Teknolojiyada iyo Wasaaradda Ganacsiga ayaa soo jeediyay: meelaynta baakadaha oo ah warshad wax soo saar ku wajahan adeeg; diiradda saaraya baakadaha cagaaran, baakadaha aaminka ah, baakadaha casriga ah, iyo baakadaha caadiga ah, In la dhiso nidaam casriyeyn teknoolajiyadeed; si loo hubiyo in wershaduhu ay ilaalinayaan kobaca xawaaraha dhexdhexaad-ilaa-sare iyadoo la xoojinayo awoodaha horumarineed ee agglomeration iyo awooda abuurista abuurka; kordhinta maalgashiga R&D si kor loogu qaado awoodaha waxqabadka madaxbannaan iyo tartanka caalamiga ah ee tikniyoolajiyadda muhiimka ah; hagaajinta wargelinta warshadaha, otomaatiga iyo heerka intelligence sirdoonka.
Isla mar ahaantaana, waxaa lagama maarmaan ah in laga takhaluso isticmaalka sarreeya iyo isticmaalka tamarta sare ee warshadaha baakadaha, sameynta iyo sameynta nidaam wax soo saar cagaaran; hogaamiyaan uruurinta awoodaha asaasiga ah ee teknoolojiyadda baakadka milatariga iyo rayidka, iyo hagaajinta heerka taageerada baakadaha ilaalinta ee howlaha milatari ee kaladuwan; tayadoodii nidaamka halbeegga warshadaha, kuna kaxee jaangooynta halbeegga Jaangooyada silsiladda saadka ayaa sare u qaadeysa heerka maaraynta heerka iyo heerka qiyaasta caalamiga ah.
6. "Qorshaha Horumarinta Warshadaha Baakadaha ee Shiinaha (2016-2020)"
Bishii Diseembar 2016, "Qorshaha Horumarinta Warshadaha Baakadaha ee Shiinaha (2016-2020)" oo ay soo saartay Xiriirka Baakadaha Shiinaha ayaa soo saaray hawsha istiraatiijiyadeed ee dhismaha awoodda baakadka, ku adkaysiga hal-abuurnimo madax-bannaan, jebinta teknoolojiyadaha muhiimka ah, iyo si guud u dhiirrigelinta baakadaha cagaaran, baakadaha aaminka ah, iyo baakadaha casriga ah. Horumarka isku dhafan ee baakadaha ayaa si wax ku ool ah u kobcinaya tartanka ballaaran ee meelaha muhiimka ah ee alaabada baakadaha, qalabka wax lagu duubo, iyo baakadaha iyo daabacaadda.
7. "Qorshaha Horumarinta ee Warshadaha Daabacaadda ee Muddada Qorshaha Shanta Sano ee 13aad"
Bishii Abriil 2017, "Qorshaha horumarinta shan iyo tobnaad ee shanaad ee daabacaadda warshadaha" oo ay soo saartay Maamulka Gobolka ee Saxaafadda, Daabacaadda, Raadiyaha, Filimada iyo Telefishanka ayaa lagu sheegay muddadii lagu jiray "Qorshaha Shan-iyo-Tobnaad ee Shanaad" saddex iyo tobnaad, baaxadda daabacaadda dalkayga. warshaduhu asal ahaan waxay la jaan qaadi doonaan horumarka dhaqaalaha qaranka, iyagoo ku guuleysan doona ballaarin joogto ah. Dhamaadka "13-ka Shanta Sano ee Qorshaha" mudada, wadarta qiimaha wax soo saar ee warshadaha wax daabaca waxay dhaafeen 1.4 tiriliyan, iyadoo lagu qiimeeyay midka ugu sareeya aduunka.
Daabacaadda dijitaalka ah, daabacaadda baakadaha, daabacaadda cusub iyo qaybaha kaleba waxay hayeen horumar deg-deg ah, mugga daabacaadda ganacsiga wax-soo-saarka ajaanibta ayaa si isdaba joog ah u sii kordheysay; dhiirrigelinta isbeddelka daabacaadda daabacaadda ee naqshadeynta hal-abuurka, habeynta shakhsi ahaaneed, iyo codsiyada ilaalinta deegaanka, iyo taageeridda hababka daabacaadda sida daabacaadda dejinta, daabacaadda shaashadda, iyo daabacaadda jajabnaanta. Tikniyoolajiyadda dijitaalka ah waa la mideeyay oo la horumariyay. Siyaasadda qaran ee warshadaha baakadaha iyo daabacaadda waxay siisaa taageero xoog leh horumarinta warshadaha.
8. “Tilmaamaha Qorshaha Horumarinta Dhaqanka Qaranka iyo Dib-u-habeynta inta lagu gudajiray Qorshihii 13-aad ee Shanta Sano”
Bishii Maajo 2017, Golaha Gobolka wuxuu soo saaray oo uu hirgeliyay "Qorshaha Horumarinta Dhaqanka Qaranka iyo Dib-u-habeynta inta lagu jiro Muddada Qorshaha Shanta Sano ee 13-ka", oo si cad u soo bandhigtay fikradaha hagaya iyo guud ahaan shuruudaha looga baahan yahay horumarinta dhaqanka inta lagu gudajiray 13-ka Shanta Sano. Muddada qorshaha. Shaxdu waxay soo jeedineysaa in la dhiirrigeliyo isbeddelka iyo casriyeynta warshadaha dhaqameed sida daabacaadda iyo qaybinta, soosaarka filimka iyo telefishanka, farshaxanka iyo farshaxanka, daabacaadda iyo nuqul, adeegyada xayeysiinta, madadaalada dhaqanka, iyo taageeridda horumarinta daabacaadda dijitaalka ah iyo nano-daabacaadda.
9. "Hababka Qiimaynta Baakadaha Cagaaran iyo Tilmaamaha"
Bishii Meey, 2019, Maamulka Gobolka ee Xeerka Suuqa wuxuu soo saaray "Hababka Qiimeynta Baakadaha Cagaaran iyo Tilmaamaha", kaas oo qeexaya shuruudaha qiimeynta baakadka cagaaran, hababka qiimeynta, nuxurka iyo qaabka warbixinta qiimeynta ee shuruudaha kaarboon hoose, keydinta tamarta, deegaanka ilaalinta iyo badbaadada alaabada baakadaha cagaaran. Waxayna qeexaysaa macnaha "Baakadaha cagaaran": meertada nolosha buuxda ee alaabada baakadaha, iyadoo la tixgalinayo la kulanka shuruudaha howlaha baakadaha, baakadaha aan waxyeellada u lahayn caafimaadka dadka iyo deegaanka bey'ada, isla markaana cunaya ilaha iyo tamarta yar.
"Hababka Qiimaynta Baakadaha Cagaaran iyo Tilmaamaha" ayaa qeexaya shuruudaha farsamo ee muhiimka ah ee qiimeynta baakadka cagaaran ee laga helayo afar dhinac: sifooyinka ilaha, sifooyinka tamarta, astaamaha deegaanka iyo astaamaha wax soo saarka.
Soo saaraha baakadaha daabacaadda ee SmartFortune waxay ku jirtay warshaddan (Habee buugaagta daabacaadda, u habee sanduuqa hadiyadda warqad, u habee boorsada hadiyadda) in ka badan 25 sano, ku soo dhowow inaad la shaqeyso warshaddeenna si aad u badbaadiso kharashkaaga.